काठमाण्डौबाट जनकपुर यसरी पुगदैछन् भारतीय राष्ट्रपति, धित मारेर हेर्ने भए हिमाली दृष्य ! « Surya Khabar
काठमाण्डौबाट जनकपुर यसरी पुगदैछन् भारतीय राष्ट्रपति, धित मारेर हेर्ने भए हिमाली दृष्य !
काठमाडौं । काठमाडौंदेखि जनकपुरको उडान अवधि २५ मिनेट हो । तर, शुक्रबार भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको उडानको समयावधि करिब ४५ मिनेटको हुनेछ ।
बुद्ध एयरको फ्रेन्च–इटालियन एटीआर विमानमा हुने राजकीय सवारी काठमाडौंबाट उडेपछि जनकपुरको हवाई बाटो नसमातेर पूर्व–उत्तर हुँदै उड्नेछ ।
त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतका अनुसार विमानको बायाँतर्फको सिटमा एक्लै रहने राष्ट्रपति मुखर्जी हिमाल हेर्दै जनकपुर पुग्नेछन् ।
राष्ट्रपति उडानका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बिहान १० बजेदेखि साढे १० बजेसम्म (आधाघण्टा) का लागि नोटाम जारीपछि विमानस्थल बन्द गरेको छ । प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार त्यसबेला काठमाडौंका लागि कुनै पनि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानरअवतरण हुने छैनन् ।
स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारले राजकीय भ्रमणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सवारीमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्री शाही मुखर्जीसँगै जनकपुर र पोखरा जाँदै छन् । चार्टर गरिने दुवै विमानको भाडा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले व्यहोर्दै छ ।
राडरको तार मुसाले काटेका कारण बिहीबार दिउँसोदेखि सबै उडान कम्तीमा २ घण्टा डिले हुन पुगे । शुक्रबार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने जनकपुर र पोखरा विमानस्थलमा उनको उडान समयअघि र पछि भने नियमित उडान हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।